Iinkqubo zeBentley -I-SIEMENS: isicwangciso esicinga kwi-Intanethi yezinto-iGeofumadas
Ikhaya/Okufumaneka/Iinkqubo zeBentley -I-SIEMENS: isicwangciso esenzelwe i-Intanethi yezinto
Iinkqubo zeBentley -I-SIEMENS: isicwangciso esenzelwe i-Intanethi yezinto
Bentley Systems waqala ishishini losapho ngexesha leminyaka 80 xa ezintsha zobugcisa Loo migaqo apho uhlanga American, apho ngokungafaniyo namanye amazwe Visionär, ukusebenza nzima kwaye wenze into elungileyo ziphantse qinisekisa impumelelo.
Kumazwe anomxholo waseSpanishi, ipesenti ephezulu yamashishini osapho awahlali kwisizukulwana sesithathu: utata uyifumene inkampani kwaye uyaphula umqolo wakhe esebenza iiyure ezili-16 ngosuku, abantwana bafunda oko abazali bagqiba kwelokuba babandakanyeke kwaye baxhase umzamo babona abazali babo; abazukulwana inkunkuma bayakufumana inzuzo kwaye banqume ukutshala izixhobo kwenye indawo.
Ndikucingile oku amatyeli aliqela, ngalo lonke ixesha uGregg Bentley ethetha ngamehlo, endaweni yamazwi akhe, ekupheleni kwenkomfa kubaluleke kangakanani ukubona abantu bephefumlelwe yimizamo yabazalwana abane ngaphandle kwekholeji. Kule minyaka mi-4 idlulileyo, oogxa bakho abagubungela uKuphefumlelwa bathethe kwiipaseji zamathuba, bebone iTrimble, iMicrosoft, i-Nokia kunye neTopCon njengabathathi-nxaxheba ngokubambisana. Kodwa bendisoloko ndisiya kwisigqibo sokuba i-CEO eguqule inkqubo yokusebenza kunye nolawulo lwemizobo ibe yitekhnoloji apho ubunjineli be-geo yeenkampani ezikufutshane kwi-Top 500 yeziseko zophuhliso ziyilelwe zaze zasebenza, kufuneka babe noluvo ngakumbi mkhulu kunokuba uye esidlangalaleni kwaye uthathe umhlala phantsi ukonwabela umzamo wakho
Sele sibona umzekelo nge-SIEMENS, apho umsebenzi wentsebenziswano ubusenziwa iminyaka eliqela. Izabelo ziyathengiswa phantsi kweemeko ezizodwa kakhulu; I-Bentley iya kwenza oku kuphela ngezo nkampani zikulungeleyo ukubuyisela izixhobo zazo kwisoftware ebinexesha elaneleyo kunye nomnqweno wokubonisa ukuba yile nto uyifunayo. Ngoku siyaqonda ukuba uninzi lokufunyanwa kukaBentley kule minyaka idlulileyo bekuyinxalenye yolungiselelo lwento i-SEIMENS eyayiza kuyidinga.
Ubudlelwane bokuphumelela bunomdla kakhulu. Imali eza kugcinwa ngabakwa-SIEMEN kuphuhliso kunye nokugcinwa kwesoftware iya kutyalelwa ekwenziweni kwezixhobo zeBentley Systems, eziza kuvelisa inzuzo ngaphakathi kwemodeli yezenzo ezinobungozi. Ngokwenxalenye yayo, iiNkqubo zeBentley zifezekisa umxhasi ophindwe kabini ngama-232 (kwinzuzo yonyaka), ngokuthatha inxaxheba kumacandelo ahlukeneyo obunjineli beGeo-engineering.
Besingalindelanga okungaphantsi; ushishino kwangoko lusekwe kutyalo-mali oluqhubekayo olwenziwa yiSIEMENs kubuchwephesha obenziwa yiBentley Systems ngenqanaba lombono elijolise kwi-Intanethi yezinto (IoT) kunye nemiceli mngeni yenqanaba le-BIM 3. Ngokuqinisekileyo iyimodeli ephazamisayo; Inkampani eyazalwa ngo-1984, inabasebenzi abambalwa abali-150, iyakwazi ukwenza i-chemistry nenye esele ikho ukusukela nge-1,847 isebenza kumazwe angama-200 kumashishini, amandla, ezempilo, iziseko zophuhliso kunye namacandelo esixeko. Enye yenza kwaye isebenze ngeenkonzo, enye ivelise izixhobo eziyifunayo.
Ukuze uqhubeke lo mzekelo, siza kubona iminyaka embalwa ipesenti ngaphantsi kwe 50% of Bentley Systems asasazwa ubuncinane ezi ndidi ezinkulu: ngumzekelo, esiye sabona phambi Trimble kunye Topcon, Microsoft for data iziseko ne Azure kunye ABAKHULU ekusebenziseni le teknoloji kwizixhobo ezifikelela kumakhaya nakucandelo.
Ngamafutshane, isicwangciso sikaBentley sokuyeka ukuba yinkampani elawulwa liqela labazalwana sinokubonwa kwindlela eyenziwe ngayo ngabaphathi bayo. Isicwangciso sakhe kukuhlala uxanduva okwethutyana, ngelixa behambisa ukuthatha inxaxheba kwezabelo kwiinkampani ezinomdla wokuthatha inxaxheba ngaphaya kwezoqoqosho.
Kwi-Intanethi yezinto, esi ayisosicwangciso sodwa. Kwelinye icala, isigebenga sakha sajikeleza i-HEXAGON, eyayifumana izixhobo ngokuthe ngcembe ezibandakanya umjikelo wonke we-AECO. Imodeli yeBentley yahlukile, inezinto ezithile zokuthambisa ngenxa yokuba nangona i-SIEMEN inecandelo elibanzi, okwangoku intsebenziswano ikukulawulwa kweziseko zophuhliso kwicandelo lombane; akukho nto ibathintelayo ukuba baye kwamanye amacandelo kamva. Kuya kuba yimfuneko ukubona impendulo ye-HEXAGON efika kade kulawulo lukaloliwe, ngesicwangciso sikaBentley sokuguqula inkqubo yase-UK emva koko ufumane inkampani yonke eqhuba uninzi lweenkqubo zoololiwe zaseYurophu.
Kuya kufuneka kwakhona ukubona ukuba kwenzeka ntoni nge-AutoDesk, ethi ibangele amathandabuzo ngokurhoxa kwe-CEO yayo kunye nenxalenye entle yabaphathi bayo kwinyanga ephelileyo. Nangona i-AutoDesk iyinxalenye ye-emporium, ukuba yinkampani yoluntu kuthetha ukuba naliphi na inyathelo elibeka ukuthatha inxaxheba kwalo emngciphekweni kunokubangela ukuba izabelo zalo ziwe; kungoko amaqabane acwangcisiweyo enza umbono we-IoT ecosystem.